Huawei dia nampitombo ny varotra tany Sina 66% | Androidsis
Ny varotra Huawei dia mandeha tsara amin'ity taona ity. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia voalaza fa tamin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona dia nisy a Fisondrotana 26% amin'ny varotrao. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manana efa nihoatra ny varotra tamin'ny taon-dasa, roa volana aorian'ny faran'ity taona ity. Ka misy ny fanantenana eto amin'ity lafiny ity, momba ny varotra hamaranana azy ireo amin'ity taona 2019 ity.
Any Chine ihany koa, ny tsenany lehibe, mandeha tsara amin'ny orinasa ny raharaha. Ireo tarehimarika ho an'ny Ny varotra Huawei amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity any Shina. Ny varotra izay ahitantsika ny fitomboana indray raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa.
Huawei dia tsy mijanona amin'ny laharana voalohany ihany, fa manao izany koa amin'ny fiakaran'ny vidin'ny varotra. Tamin'ny taon-dasa dia nivarotra telefaona 25 tapitrisa izy ireo tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona. Tamin'ny taona 2019, ity isa amidy ity dia nitombo hatrany amin'ny 41,5 tapitrisa ny telefaona amidy.
Mihevitra fiakarana 66% tamin'ny varotra tamin'ny taon-dasa. Noho io fiakarana io, ny anjarany eo amin'ny tsena dia 24,9% (ampahefatry ny tsena) mankany amin'ny 42,4% mahavariana amin'ny tsena. Ka ny marika dia manakaiky ny fandrakofana ny antsasaky ny tsena any Sina. Tarehimarika mahavariana.
Huawei ihany koa no hany marika mitombo ao Shina. Amin'ny tranga ambiny dia hitantsika fa ny marika toa ny Vivo, OPPO na Xiaomi dia mijanona eo amin'ny toerany, na dia amin'ny tranga rehetra aza dia misy ny fihenan'ny varotra. Raha ny tranga Xiaomi dia 33% ny varony raha oharina tamin'ny taon-dasa, ohatra.
Tsy misy fisalasalana, mazava izany ny tsena any Shina dia manohana mazava tsara an'i Huawei. Ny marika dia mitombo amin'ny taha mahavariana eo amin'ny tsena. Indrindra ao amin'ny firenena toa an'i Shina, izay nianjera nandritra ny roa taona izao ny varotra telefaona. Saingy ity orinasa ity dia miato miaraka amin'ity fironana ity, nahazo fitomboana mahavariana. Ka tsy maintsy ho hitantsika ny fomba fitomboany amin'ny telovolana fahefatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei dia manohy mampitombo ny varotra ao Shina
WhatsApp dia ho fitaovana maro
Ny Samsung Galaxy S10 Lite dia mandalo ny sehatry ny fitsapana Geekbench